အောက်တိုဘာလ 26, 2010 တွင် 6:14 ညနေ
ဤသည် plugin ကိုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ယခုကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများနှင့်အတူ site တစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲနေတဲ့ကလေးတွေဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်.
နိုဝင်ဘာလ 3, 2010 တွင် 3:45 ညနေ
မင်္ဂလာပါ, မှအလိုအလျှောက်အဆင့်မြှင့်ကတည်းက 0.65 ငါသည်ငါ့စာမျက်နှာများပေါ်တွင်ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့: de_DE.po ချွတ်ယွင်းဖြစ်သလိုပဲဂျာမန်ဘာသာစကားဖိုင်. လတိုတောင်းပုံစံများနှင့်အတူဆောင်းပါးများစာရင်းထဲတွင်ဘာသာပြန်ချက်စကားလုံးမ. ၏ instea ဒါ “Oct” သင်ပြီးပြည့်စုံသောဂျာမန်ဘာသာပြန်ခြင်းတွေ့မြင်နိုင် “Okt_Oktober_abbreviation”. အင်္ဂလိပ်နှင့်ဂျာမန်အမည်များကိုအတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းသာလျှင်မှန်ကန်စွာပြသခဲ့သည်. ဒီတော့ Deactivate 0.65, နောက်သို့ 0.61 (နှင့် 0.64 ငါနောက်မှကြိုးစားပါလိမ့်မယ်) – နှင့်: အရာအားလုံးဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့. အခုတော့ငါမြင် “Oct”…
နိုဝင်ဘာလ 4, 2010 တွင် 10:45 နံနက်
ဒီထုတ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်, ယခုပင်သင်သည်ဖြစ်ကောင်းသစ်ကို plugin ကိုအတွက် gettext ပေါင်းစည်းမှုကို disable နိုင်ပါတယ်သို့သော်, အရာလျှော့ချထက် သာ. ကောင်း၏
နိုဝင်ဘာလ 4, 2010 တွင် 7:49 ညနေ
ငါအများကြီးက်ဘ်ဆိုက်များသို့သင့် plugin ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါပြီ. ဒါဟာ Google ကကောင်းသော indexing ကိုငါ့က်ဘ်ဆိုက်များကိုကူညီပေးပါ, သို့သော်, အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်များအမြဲမြင့်မားသောကြောင့်ဝန်ဆာဗာ၏ hosting provider ကအားဖြင့်ဆိုင်းငံ့ခံရ.
ရှေ့မှာ, ငါအသုံးပြုရန် http://getfreegames.info, ယခုမူကား, ကိုယ်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ရှိသည်. သငျသညျအကြှနျုပျကိုအဖြေတစ်ခုပေးနိုင်သလား (hosting အဆင့်မြှင့်အကြောင်းကိုဖော်ပြကြဘူး)?
နိုဝင်ဘာလ 4, 2010 တွင် 11:52 ညနေ
ငါသည်သင်တို့၏ hosting အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်အားပြောပြမည်မဟုတ်, ကြောင်းဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးင်ပေမယ့်.
1. APC ကိုသုံးပါ, ဒီသိသိသာသာ server ကိုဝန်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်
2. supercache ကိုသုံးပါသို့မဟုတ်အလားတူ, ဒီက၎င်း၏အားသာချက်များနှင့်အချို့သောအားနည်းချက်များရှိပြီး
ဝန်ရှိလျှော့ချရေး default ဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆို disable လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, မူသောသင်တို့မူရင်းဘာသာစကားစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အပြေးကနေ Transposh တားဆီးပါလိမ့်မယ်, ပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါ hits အများစုကြာရာ.
နိုဝင်ဘာလ 5, 2010 တွင် 6:19 နံနက်
သငျသညျငါ uncheck ရန်ရှိသည်ဆိုလို: “default ဘာသာစကားဘာသာပြန်ချက် Enable (default ဘာသာစကား၏ဘာသာပြန်ချက် Allow – တစ်ဦးထက်ပိုသည့်အဓိကဘာသာစကားနှင့်အတူဆိုဒ်များများအတွက်အသုံးဝင်သော)”. ?
နိုဝင်ဘာလ 5, 2010 တွင် 12:04 ညနေ
နိုဝင်ဘာလ 6, 2010 တွင် 6:52 ညနေ